China mveliso cryo slim umatshini slimming nokwenziwa kunye mveliso | GGLT
Indlela entsha, engafunekiyo yokunciphisa amanqatha omzimba adibeneyo ngobunono nangempumelelo akhokelela ekunciphiseni, ekuqhubekeni kokuncitshiswa kwamanqatha kwiindawo ezinyangiweyo. Njengoko i-triglyceride kumafutha iya kuguqulwa iqiniswe kumaqondo obushushu athile asezantsi, isebenzisa itekhnoloji yokupholisa ukukhetha ngokukhethekileyo i-fat bulges kunye nokuphelisa iiseli ezinamafutha ngenkqubo ethe chu engonzakalisi izicwili ezijikelezileyo, ukunciphisa amanqatha angafunekiyo. isiqwenga somhlaba silawula ubushushu bolusu kwaye sikhusela ulwakhiwo oluhle lwesikhumba, siqonda isiphumo sokumisa umzimba ngokukhawuleza ngelixa siqinisa ulusu!
I-1.Cavitation: ngqo kumaleko onamafutha, ngokukhawuleza ukungcangcazela kwe-cellulite ehleli nzulu, ukuvelisa intsholongwane engenawo manani, ukubetha ngamandla iiseli ezinamanqatha, mabazivelise ngokuqhekeka ngaphakathi, kwaye bonyibilike bube yiasidi enamafutha yasimahla.
I-2.Multi-polar RF: isebenzisa itekhnoloji yobunini ukwenza isakhono esomeleleyo esomeleleyo esolukiweyo. Le matrix yamandla eshinyeneyo ingena kwiindawo ezininzi zesikhumba, iyifudumeza ngaphakathi nangaphandle. Ukugqitywa kokungena kwesikhumba kuqinisekisa ukuphucula ukusebenza kweeklinikhi kwaye kuvelise iziphumo ezibonakalayo.
I-Lipo laser: isebenzisa itekhnoloji ye-laser ebandayo yakutshanje ukunciphisa i-girth kunye ne-fat fat phantse kuyo yonke imimandla yomzimba ngaphandle kotyando, ixesha lokuphumla okanye ubomvu. Unyango oluqhelekileyo lwemizuzu engama-40 esinqeni lunokunciphisa umntu nge-½ ukuya kwi-¾ ye-intshi ngelixa iprotocol epheleleyo yonyango esibhozo ihlala ikhokelela kwilahleko ye-intshi ezininzi.
I-Cryolipolysis ibonakaliswe ngokukodwa ekunciphiseni amafutha: nokwenza umthambo. Nangona uninzi lwabantu luyanyangeka, ayisosisombululo sokulahleka kobunzima ngokubanzi. Siphakamisa ukuba umgqatswa ofanelekileyo ungaphakathi okanye kufutshane nobunzima bomzimba (BMI) wabo kweli qela baya kubona ezona ziphumo zibalaseleyo. Kodwa, isenokuba sisizathu esongezelelekileyo sokukhuthaza abo baqala utshintsho kwindlela yokuphila.
Ulawulo Handleindlela Chukumisa Cryo enkuluubungakanani bokubamba: 1 # 195 * 85mm2 # 210 * 90mm
Cacisa 10.4 3 # 215 * 100mm4 # 230 * 105mm
Bamba isikrini 4.5 Cryo encinciubungakanani bokubamba: 1 # 140 * 70mm2 # 155 * 80mm
Phathaizinto Isilicon 3 # 165 * 90mm
Phathaubushushu -10 ℃ / 45 ℃ Isilevu kabiniubungakanani bokubamba 80 * 40mm
Uxinzeleloimveliso 0.08MPa Ubunzima bentloko 40KHz
Ubuso beRF 3MHz Laserubude bamaza 650nm
Q1: Njani ngexesha lokuhambisa kunye nemowudi yokuhamba?
I-A1: Emva kokufumana intlawulo iimpahla zinokuhanjiswa zingaphelanga iintsuku zokusebenza eziyi-3-5. Ukhetho lokucacisa i-DHL, i-FedEx, i-TNT, i-UPS, okanye ukuhambisa ngenqanawa ngomoya okanye ulwandle kwihlabathi liphela.
I-Q2: Ngaba umthengi unokufaka kwaye asebenzise umatshini ngexesha lokuqala?
I-A2: Sibonelela ngokufakwa kunye nokusebenza kwevidiyo kunye nencwadana yomsebenzisi yesalathiso sakho. Sinokubonelela ngoqeqesho kwi-Intanethi iiyure ezingama-24.
Q3: Emva kwenkonzo yentengiso okanye inkxaso yetekhnoloji?
I-A3: Sinobuchwephesha bobuchwephesha obuxhasa iqela leenkonzo zakho ngexesha elifanelekileyo ngokuqhakamshelana nomnxeba okanye ngengxoxo ekwi-Intanethi.
Q4: Ngaba singaprinta iLogo yam kwiimveliso?
A4: Ewe sinako. I-OEM kunye ne-ODM zamkelekile apha.
Egqithileyo cryotherapy cellulite ukususwa cryolipolysis umzimba slimming umatshini ngumkhenkce
Okulandelayo: I-2021 H2 kunye ne-O2 encinci yedrabrasion yesitshizi somatshini weoksijini wejet
I-Cryolipolysis Machine yoBunzima beLungu le-360 yeCryo ...
Ukukrola okupholileyo kwe-4 kulawula umatshini wokulahleka kwamafutha